Ankoatra izany dia notazominy hatrany ny fifandraisana mahafinaritra amin’ireo mpiara-miasa ao amin’ny sekoly vaovao misy azy, sy ny fahaizana miara-monina amin’ireo Ray aman-dReny eo antoerana. Rehefa misy fiaraha-miasa ilaina dia tonga mavitrika ireto farany manotrona azy sy manampy azy ary dia tsy mahafoy mihitsy. Nilaza izao ny mpampianatra iray ao an-tsekoly fa: “Hafaliana ho anay
ny fisian'ny Projet Jeune Leader aty Ankaramena ka ny fitohizany hatrany no angatahinay. Eto ary dia mbola manamafy ny fitazomana ny mpiandraikitra efa aty an-toerana izahay.” Izany no manaporofo tokoa fa mahafapo ny fiaraha-monina napetrak’i Olivia teo aminy sy ireo mpiara-miasa.